फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक, टेवल होला त प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ? « Nepal Tube Australia
गृहपृष्ठ » Breaking News » फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक, टेवल होला त प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ?
फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक, टेवल होला त प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ?
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन २३ गते अर्थात् आउँदो आइतवारका लागि प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले २३ गते दिउँसो चार बजेका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वान गर्नुभएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फागुन २३ गते संसद बैठक आह्वानको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । गएको पुस पाँच गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद विघटनको निर्णय बदर गरेर १३ दिनभित्र बैठक बोलाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
यहि बाध्यात्मक अवस्थाका कारण संसद बैठक आह्वान गरिएपनि अधिवेशन छोट्याएर छिट्टै स्थगन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताइएको छ । यता, पहिलो बैठकमै नेकपाकै प्रचण्ड माधव समूह प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव टेवल गर्ने तयारीमा जुटेको बताइएको छ ।